“Maalin kasta Ciid ma ahan.”. Mourinho oo DIGNIIN u diray xiddigihiisa ka hor kulanka Manchester City – Gool FM
“Maalin kasta Ciid ma ahan.”. Mourinho oo DIGNIIN u diray xiddigihiisa ka hor kulanka Manchester City
(England) 09 Nof 2018. Jose Mourinho ayaa digniin u diray xiddigihiisa Manchester United ka hor kulanka ay axada ku wajihi doonaan Dariskooda Manchester City kulanka loogu magac daray Derby Manchester.
Macalinka reer Portugal ayaa kooxdiisa uga digay goolasha lagu bilaabo, isagoona u sheegay in markasta uusan waqtiga ku saacidi doonin inay ka soo kabtaan jugta hore.
Red Devils ayaa kulamadii dambe oo dhan ka soo kabaneysay goolal lagala hor maray amaba la imaaneysay guul soo daahday iyadoo ay ugu dambeysay kulankii Juventus oo ay labo gool ku dhaliyeen 5-daqiiqo gudahood xilli gool lagu hogaaminayay.
Jose oo la waydiiyay haddii uu wanaag u arko ‘comebacks’ ay maalmahaan sameynaysay kooxdiisa ayaa yiri.
“Haa, laakiin waxaan aadi karnaa dhanka kale, maxaa markasta goolka nalooga dhalinayaa.
“Dhanka fiican marka laga eego way sahlan tahay in la dareemo koox aan is dhiibeyn, had iyo jeer helaysa wado ay dib ugu dagaalanto mararka qaarna ay Natiijada dhanka kale ugu rogto, mararka qaarna ay Natiijada badeli wayso, laakiin waxaynu nahay koox leh ruuxiyadaas aan dib ugu dagaalanno laakiin suuro gal ma ahan inaad markasta sameyso comeback.
“Haddii aan sii wadno in goolasha nalaga dhaliyo oo nalagu bilaabo waxaa jiri doonta maalin aan ka soo kaban karin sidaa darteed waa inaan midaa ka kornaa, Waayo way cadahay inay kooxdu koreyso.
“Laakiin waa inaan sidoo kale ka kornaa dhanka isku xirnaanshaha aana si fiican ku bilaabano kulamada.
“Kulankii Juventus way dhacday, waxaa goolka nalaga dhaliyay daqiiqadii 60-aad meelahaas waxaana sameynay bilow fiican 15 ama 20-kii daqiiqo ee ugu horreeyay waxaan ku jirnay xaalad fiican.”.
Manchester City marna lagama adkaan horyaalka Premier League waxaana taa u dheer in labadii kulan ee ugu dambeeyay ay mininkooda ku ciyaarto ay dhalisay 12-gool.
Muxuu ka yiri David Silva kooxda Manchester United, kahor kulanka Manchester derby?